Maitiro ekubatanidza iyo PS5 DualSense controller kune yako iPhone kana iPad | IPhone nhau
Maitiro ekubatanidza iyo PS5 DualSense controller kune yako iPhone kana iPad
Mutambo we PlayStation 5 wasvika kudzimba dzinoverengeka mukati mekota yekupedzisira ya2020. Tinofanira kutaura kuti vamwe vedu varipo pano vane rombo rakanaka rekuve nevamwe PS5 kumba, uye nekudaro, ichiperekedzwa neayo inoshamisa DualSense kure.
Iye zvino mutyairi mutsva wePS5, iyo DualSense inoenderana zvizere ne iPhone yako nePadad saka tinokuratidza maitiro ekuibatanidza. Izvi zvinowedzera yazvino Sony PlayStation controller kune iyo runyorwa rweBluetooth controllers inoenderana neshanduro dzakasiyana dzeIOS kwemakore akati wandei. Usapotsa iyi dzidziso nyowani yatakasarudza kukuunzira.
Sezvazvinoitika pane dzimwe nguva, kutanga tafunga kukusiya iwe kumusoro vhidhiyo diki matinokuratidza nhanho nhanho kuti unogona sei gadzira kubatana pakati pe iPhone yako kana iPad uye yako PS5 DualSense controller. Nechikonzero ichi, tinokukoka iwe kuti upfuure nemuvhidhiyo yedu uyezve kuti utore mukana wekunyorera uye uenderere mberi uchitiperekedza kunharaunda yeActualidad iPhone, uyezve chiteshi chedu cheTeregiramu nenharaunda yevanopfuura vanoshandisa chiuru mune chinotevera chinongedzo (EMAIL).
Maitiro ekubatanidza DualSense neako iPhone / iPad
Ita shuwa kuti yako PlayStation 5 uye yako DualSense controller inodzimwa kuti udzivise kugadzira otomatiki kubatana.
Panguva imwe chete bhatani reKugovana (kumusoro kuruboshwe) uye PS bhatani (repazasi nzvimbo) kwemasekondi angangoita matatu kusvika mashanu.
Kana mwenje uchipenya uchitenderedza iyo DualSense controller touchpad, iri mu "pairing" mode.
Iye zvino tungamira ku Zvirongwa> Bluetooth uye tsvaga iyo DualSense iri kure
Dhinda uye ichabatana otomatiki
Aya ndiwo matanho ari nyore anozokutendera iwe kubatanidza yako PS5 DualSense controller, asi mukupfuura tinokuyeuchidza kuti iwe unogona gadzirisa kutonga yeDualSense yako neiyo iPhone kana iPad nenzira yakapusa:
Ita shuwa yekubatanidza yako yakasarudzwa controller kuburikidza neBluetooth kutanga
Zvino enda kunyorera Zvirongwa kubva ku iPhone yako kana iPad uye enda kune chikamu General
Paunenge uchinge uri mukati, iwe unowana mashandiro ari "control" kana "mutambo controller" zvinoenderana nemutauro wakapihwa iyo iPhone.
Pinda mukati Kuita somunhu mukati mechikamu uye inoita basa racho. Iye zvino unozogona kuita shanduko dzaunofunga dzakakodzera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekubatanidza iyo PS5 DualSense controller kune yako iPhone kana iPad
iOS 14.5 inogonesa iyo DualSIM sarudzo mu5G kufukidzwa
Iyo Apple Car yaizove yakavakirwa pane iyo Hyundai chikuva